भंगहा ८ मा बेरोजगार दर्ता फारमको मुल्य दुइ सय ! भिडियो सहित - Mahottari Post
भंगहा ८ मा बेरोजगार दर्ता फारमको मुल्य दुइ सय ! भिडियो सहित
३० चैत्र २०७५, शनिबार १२:०१
नेपाल सरकारले न्यूनतम रोजगारीको अवसर नपाएको यूवाहरुकोे लागि न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन फारम निशुल्क उपल्वध गराएपनि महोत्तरी जिल्लाको भंगहा नगरपालिका ८ पररीयाका स्थानीयहरुलाई १ देखी २ सय सम्म पैसा तिरेर फारम लिनु परेको हो ।
फाल्गुन २४ गतेबाट वडा कार्यालय सचिव बिहिन रहेको छ । सचिव बिहिन कार्यालयको मौका छोपी वडा अध्यक्ष महोमद रफिक आलमको आफन्त निशुल्कमा पाउने फारम एक सयको दरले बेचिरहेको स्थानीयहरुले गुनासो गरेको थियो ।
गुनासो बढेपछि भंगहाको पररीया चोक स्थित हमराह वस्त्रालयका संचालक सकिल राईनललाई बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फारम छ । पत्रकारको टोली सोधेको थियो । राईलेभने, छ तर पैसामा तिरेर लिनुपर्छे । फारम बहिरबाट किनेर ल्याएको बताउदैे निशुल्क लिनेलाई नगरपालिका जानुपर्छ , पररीयामा पाउदैन । यहाँ पैसा तिरेर मात्र फारम पाउछ उनलेभने । धेरै प्रयास पछि निशुल्क फारम ८० रुपैयामा पत्रकारलाई दिए ।
यो बिषयमा भंगहा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सुर्य नरायण ठाकुरले हामीले सकिललाई फारम नदिएको बताए । नगरपालिकाले भरपाई गराएर मात्र वडामा पठाउने भएकोले सकिललाई नदिएको उनले भने ।
नगरपालिकाले आफै छपाएर वडा कार्यालयमा पठाएको छ । जसले पैशामा बिक्री बितरण गरेको छ , त्यस्ता व्यक्तिलाई नगरपालिकाले छलफल गरेर कार्वाही गर्ने भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेले बताए ।
राईनको अहिले फरार रहेकोले खोजतलास कार्य जारी रहेको भंगहा सितापुर चौकीका प्र.ना.नि झमक धिमिरेले जानकारी दिएको छ ।